Abathengi Benyama Yezimbuzi
Ucwaningo lwesiFulentshi 'Isimo, izinguquko kanye nekusasa lembonini yezimbuzi emhlabeni wonke' (Okthoba 2018) lithole ukuthi iningi lembuzi idliwe ngqo ngumkhiqizi noma endaweni yakithi. Kuphela ngamaphesenti ama-0.5% wembuzi yezimbuzi ehweba ngokomthetho emazweni angaphandle. Lokhu kufakazela isimo esifanayo eNingizimu Afrika.
Ucwaningo lweMakethe Yenyama Yezimbuzi
Ucwaningo lwe-Kalahari Kid Corporation lithole ukuthi amaqembu abathengi abahola kancane abavame ukukwazi ukuthenga isidumbu sonke. Kuphakanyisiwe ukuthi le makethe ingahlonywa ngokunikeza ukusika okuphansi kwezindleko zenyama, njengentamo nesifuba, i-flap ehlanganiswe kwifomathi ebhokisini yokudayisa emkhakheni ongakahleleki. I-Offal idliwe ikakhulukazi emkhakheni wendabuko kepha ngokuvamile ingaba khona ngesikhathi sezinyanga zasebusika.
Ngokusho kocwaningo oluthi 'I-Profile of the South African Goat Market Value Chain' (2017) uMnyango wezoLimo, amaHlathi kanye nenhlanzii bathole ukuthi ngokuvamile abathengi abakhulu be-chevon eNingizimu Afrika yiqembu eliphansi lokuhola. Inyama yezimbuzi ngokuvamile isebenzisa la maqembu njengemithombo yansuku zonke yamaprotheni futhi ibhekwa kubalulekile emikhosini yomshado kanye nemingcwabo.
Imbuzi iyadliwa kakhulu ngabasebenzisi bamaSulumane nabamaHindu. I-India inenani eliphakeme kakhulu lezimbuzi emhlabeni (35%) kanye nama-95% wezimbuzi ezihlatshiwe eNdiya ziyadliwa lapho. Ngakho inyama yezimbuzi idlala indima enkulu ekudleni kwamakhasimende amaHindu.
ENingizimu Afrika, inyama yezimbuzi ingatholakala kuma-butcheries amaSulumane, amaPutukezi nama-Italian futhi nawo athandwa kakhulu emiphakathini yama-Kenya ase-Ghana, amaGhana, amaNigeri, ama-Uganda kanye neminye imindeni eNorthern Suburbs yaseSandton, kusho i-Kalahari Kid Corporation. Ukungazi kwabathengi kanye nokubona okungalungile mayelana nokunambitheka kwemfuyo yezimbuzi kuvimbela imakethe kwabanye abantu kanye namaqembu angeniso.
Ukudliwa Kwezimbuzi KwaZulu-Natali
Isifundazwe saKwaZulu-Natali yiimakethe enkulu yembuzi eNingizimu Afrika. Izimbuzi zisetshenziswa amaSulumane agubha ama-Eid, imikhosi yamaHindu kanye nemiphakathi ye-expat yaseBangladesh, ePakistan, e-Ethiopia, eSomalia, eRwanda, eCongo, eCameroon naseNigeria. Izimbuzi zisetshenziselwa imikhuba yokukhulekela okhokho babo kanye nesimiso sabo sokwahlulela sendabuko kanye nomnotho.
Ucwaningo olwenziwa nguHilton Sanders wezimbuzi eziMdabu zaseNingizimu Afrika (IVG-SA) lithole ukuthi kuhlatshwe izimpondo ezingaphezu kwezingu-850 000 KwaZulu-Natal (KZN) ngonyaka wezi-2013. (Izibalo ezihlanganiswe nezingxoxo noMnyango Wezolimo, iNdlu Abaholi Bendabuko, abalimi bezimbuzi zokuhweba nabathengisi bekhishwa njalo eminyakeni emihlanu, kodwa bekungatholakali ngo-2018.)
Amanani ka-2013 ahlanganisa izimbuzi ezingu-400 000 ezihlatshelwe ukugubha ukuzalwa, 214 000 emingcwabeni kanye no 42 000 emishadweni yesiko. Lezi zibalo kulindeleke ukuba ziphindwe kabili eminyakeni emihlanu ezayo nezimbuzi ezingaphezu kwezigidi ezingu-1,7 ezidingekayo emakethe yendabuko yaseKZN ngo-2018 nangaphezulu.
Imbuzi e-KZN iningi leMbuzi ehlanzekile (echungechunge yembuzi) kanye neMigwaqo yeMbuzi.
I-KZN ayikwazi ukunikeza isidingo sesifundazwe kanye nezimbuzi eziphilayo zivela kwezinye izifundazwe kanye naseNamibia. Kulo makethe, izimbuzi zithengiswa ngokuphakama kunesisindo, ngakho isilwane esingama-22 kg no-50 cm high (ekuphakameni kwesigcawu) sizothola intengo ephakeme kunezilwane ezingama-25 kg ku-45 cm ubude. Izimbuzi ezithengiswa eKZN nazo zifuna intengo ephakeme kunalokho lapho kuthengiswa noma yikuphi eNingizimu Afrika.
Iziningi zezimbuzi zithengiswa ngqo kubasebenzisi bokuphela (ngokusebenzisa abathengisi, ukukhokhelwa kwempesheni noma amatekisi) kanti kuphela ama-5% athengiswa ngezindalini.